काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ग्यालेक्सी स्पेसल्टी क्लिनिक प्रालिबीच सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मी र ग्यालेक्सी स्पेसल्टी क्लिनिकका प्रबन्ध निर्देशक शिवराज केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सम्झौतापश्चात आइएमई जनरल...
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र काठमाण्डौको महाराजगन्जस्थित काठमाण्डौ प्याथ ल्याब र डाग्नोस्टिक सेन्टरबीच सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मी र काठमाण्डौ प्याथ ल्याबका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स : बीमाशुल्क आर्जन बढ्यो, नाफा घट्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा १.८१ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको अवितरित हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज वैशाख २१ गते अन्तिम दिन रहेको छ। यो कम्पनीको अवितरित हकप्रद सेयर गत वैशाख १२ गतेबाट लिलामीमा राखिएको थियो। लिलामी सेयरमा हिजो वैशाख २० गते बैंकिङ समयसम्म बोलपत्र पेस गर्न सकिने भनिएको थियो। तर, सरकारले इदका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएकोले आज वैशाख २१ गते...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयरमा आवेदन दिने म्याद एक दिन थपियो
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको अवितरित हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने म्याद एक दिन थपिएको छ। यो कम्पनीको अवितरित हकप्रद सेयर गत वैशाख १२ गतेबाट लिलामीमा राखिएको थियो। लिलामी सेयरमा आज वैशाख २० गते बैंकिङ समयसम्म बोलपत्र पेस गर्न सकिने भनिएको थियो। तर, सरकारले इदका अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएकोले भोलि वैशाख २१ गते बैंकिङ...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको ९० हजार बढी कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले अवितरित हकप्रद सेयर आज वैशाख १२ गतेबाट लिलामीमा राखिएको छ। कम्पनीले गत फागुन २२ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो। उक्त अवधिमा बिक्री नभएको संस्थापक समूहको २ हजार २६१ कित्ता र सर्वसाधारण समूहको ८८ हजार ९३४ कित्ता गरी कुल ९१ हजार १९५ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिएको...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको एजीएमबाट ७.३७% लाभांश अनुमोदन
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योेरेन्स लिमिटेडको २४ औँ वार्षिक साधारणसभा आज सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौको लैनचौरस्थित लैनचौर बैङ्क्वेट्समा सम्पन्न सभाले सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न भनी प्रस्ताव गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का वितरणयोग्य मुनाफाबाट हाल कायम रहेको चुक्तापूँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.३७ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ७.३७...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको अवितरित हकप्रद सेयर वैशाख १२ बाट लिलामीमा आउने
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले अवितरित हकप्रद सेयर यही वैशाख १२ गतेबाट लिलामीमा राख्ने भएको छ। कम्पनीले गत फागुन २२ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म हकप्रद सेयर बिक्री गरेको छ। उक्त अवधिमा बिक्री नभएको संस्थापक समूहको २ हजार २६१ कित्ता र सर्वसाधारण समूहको ८८ हजार ९३४ कित्ता गरी कुल ९१ हजार १९५ कित्ता सेयर लिलामीमा राख्न लागिएको...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको ९१ हजार बढी कित्ता सेयर लिलामीमा राखिने
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको अवितरित हकप्रद सेयर लिलामीमार्फत बिक्री गरिने भएको छ। कम्पनीले गत फागुन २२ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म प्रति सेयर रु.१०० अंकित दरका ४६ लाख ३० हजार ३४४ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो। कुल निष्कासनमध्ये रितपूर्वक आवेदन दिएका १३ हजार ६८९ आवेदकलाई ४५ लाख ३९ हजार १४९ कित्ता...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका सीईओ श्रेष्ठ सम्मानित
काठमाण्डौ । नेपाल व्यवस्थापन संघले आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युगेशभक्त बादे श्रेष्ठलाई 'आउटस्ट्यान्डिङ म्यानेजमेन्ट अवार्ड–२०२२' बाट सम्मानित गरेको छ। संघद्वारा चैत २६ गते काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रेष्ठले उक्त अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा श्रेष्ठले संघलाई...
मूल्य समायोजनपछि आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । बोनस सेयरका लागि आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता ६०२.८० रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ६४५ रुपैयाँ थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यो कम्पनीको सेयर कारोबारमा...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन, कति छ बोनस सेयर ?
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज चैत २४ गते अन्तिम दिन रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले भोलि चैत २५ गतेदेखि आउँदो वैशाख ९ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज चैत २४ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो कम्पनीको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा वैशाख ९ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो २४ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो वैशाख ९ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सभा काठमाण्डौको लैनचौरस्थित लैनचौर बैंक्वेटमा बिहान १० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न भनी प्रस्ताव गरिएको आर्थिक...